पेलेको बायो : रोनाल्डो र मेस्सीलाई असहज !
मुख्य पृष्ठखेलकुद फुटबलपेलेको बायो : रोनाल्डो र मेस्सीलाई असहज !
विराटनगर । ब्राजिलियन लिजेन्ड पेलेले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्रामको बायो परिवर्तन गरेका छन् । स्टार खेलाडीद्वय लियोनल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफ्नो कीर्तिमान तोडेपछि तीन पटकका विश्वकप विजेता पेलेले आफ्नो बायो फेरेका हुन् ।
बार्सिलोनाका फरवार्ड मेस्सीले गत डिसेम्बरमा फुटबलका महान हस्ती पेलेको कीर्तिमान भङ्ग गरेका थिए । ३३ वर्षीय मेस्सीले पेलेको एकै क्लबका लागि सबैभन्दा बढी गोलको कीर्तिमान भङ्ग गरेका हुन् ।
ब्राजिली महान फुटबलर पेलेले सान्टोसका लागि १९ सिजनमा ६४३ गोल गरेका छन् । उनी सन् १९५६ देखि १९७४ सम्म सान्टोसमा आबद्ध रहेका थिए ।
यता, इटालियन क्लब युभेन्टसका फरवार्ड रोनाल्डो गत आइतबार राति उडिनेसविरुद्ध दुई गोल गर्दै फुटबल इतिहासमा सर्वाधिक धेरै गोल गर्ने दोस्रो खेलाडी बनेका थिए ।
रोनाल्डोले करिअर गोलसङ्ख्या सात सय ५८ पुर्‍याका थिए । उनले सात सय ५७ गोल गरेका पेलेको कीर्तिमान भङ्ग गरे । पेले सन् १९५६ देखि १९७७ सम्म खेल्दा सात सय ५७ अफिसियल गोल गरेर दोस्रो सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका थिए ।
तर, सामाजिक सञ्जाल इन्स्टामा पेलेले आफ्नो गोलसङ्ख्या एक हजार दुई ८३ पुर्‍याएका छन् । बायोमा गोलसङ्ख्या उल्लेख गर्दै पेलेले लेखेका छन्, ‘मिडियाको ममाथि आरोप छ कि मैले आफ्नो बायो परिवर्तन गरेर यी ठूला स्टारद्वयलाई छायाँमा पार्ने काम गरेँ, जसले मेरो कीर्तमान भङ्ग गरिरहेका छन् ।’
‘यो बायो सधैं उस्तै छ जब मै मैदान उत्रिएको थिएँ । यो अङ्क र अविश्वनीय उपलब्धिले हामीलाई अल्मल्याउन सक्दैन’, उनले लेखेका छन् ।
उनले उल्लेख गरेकाे गोल सङ्ख्याका कारण स्टारद्वय रोनाल्डो र मेस्सीलाई पेलेकाे कीर्तिमान तोड्न असम्भवजस्तै देखिएको छ ।